के तपाईको मोबाइल स्लो भयो ? यस्ता छन् स्पीड बढाउने तरिका
स्मार्टफोन प्रयोग गर्दैहुनुहुन्छ तर फोन स्लो भएर हैरानी खेपिरहनु भएको छ ? फोन स्लो भएका कारण तपाईलाई साथीभाइहरूको स्पीड मोबाइलका अगाडि आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्न लज्जाबोध त भइरहेको छैन ? सुरूमा खरिद गर्दा तेज गतिमा चल्ने तपाईको मोबाइल हिजोआज विस्तारै सुस्त हुँदै गइरहेको त छैन ? यदि यस्तै समस्यामाबाट ग्रसित हुनुभएको छ भने तपाइँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन ।